ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): သီချင်း နားဆင်ခြင်းဟာ လူတွေကို နည်းပေါင်းစုံနဲ့ အကျိုးပြု နေတာကို သိကြရဲ့လား ??? ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): သီချင်း နားဆင်ခြင်းဟာ လူတွေကို နည်းပေါင်းစုံနဲ့ အကျိုးပြု နေတာကို သိကြရဲ့လား ???
သီချင်း နားဆင်ခြင်းဟာ လူတွေကို နည်းပေါင်းစုံနဲ့ အကျိုးပြု နေတာကို သိကြရဲ့လား ???
ရုံးကအပြန် ၊ ကျောင်းက အပြန်မှာ သီချင်း ခပ်လန်းလန်းလေး တစ်ပုဒ်ကို နားဆင် လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဒာကိုယ် တစ်ခုလုံး လန်းဆန်း သွားသလို ခံစားမှုမျိုး လူတိုင်း ဖြစ်ဖူးကြ ပါလိမ့်မယ်။ သီချင်း နားဆင်ခြင်ဟာ တကယ် ကိုလည်း လူတွေကို နည်းပေါင်းစုံနဲ့ အကျိုးပြုနေတယ် ဆိုတာ သုတေသီ တွေက လေ့လာတွေ့ရှိ ထားပါတယ်။
ဂီတဟာ ပြင်ပ လောက ကနေ လူတွေရဲ့ စိတ်နဲ့ ဆက်သွယ်မှုကို အကောင်းဆုံး ပြုလုပ် ပေးနေတဲ့ အရာ ဆိုတာကတော့ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင် ပါဘူး။ ဂီတနဲ့ လူ့ခန္ဒာ ကိုယ်ဟာ ဆိုရင် ဝိုင်ယာကြိုးနဲ့ သွယ်တန်း ထားသလို မျိုးကို ခိုင်မြဲနေတယ်လို့ သုတေသီတွေက ဆိုပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေဟာ သီချင်းနားထောင်ပေးတာနဲ့ fibromyalgia လို့ ခေါ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဖြစ်တတ်တဲ့ အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲမှုတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံက ဆရာဝန်တွေက ဆိုပါတယ်။
သီချင်းနားထောင်ခြင်းဟာဆိုရင် ဦးနှောက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ opioid လို့ ခေါ်တဲ့ နာကျင်မှုတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေကို ထုတ်လုပ်ပေးမှုကို အစပျိုးပေးနိုင်တာကြောင့် နာကျင်မှုတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်တာပါ။
ဂီတဟာ နှလုံးရောဂါအတွက် အကောင်းဆုံးကုထုံးအဖြစ် သုတေသီတွေက လက်ခံထားကြပါတယ်။ ဂီတ ကုထုံးဟာ လူနာတွေကို စိတ်တည်ငြိမ်စေတဲ့အတွက် နှလုံးနဲ့ သွေးကြောတွေရဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေကို တည်ငြိမ်သွားစေတဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀ စက္ကန့်စာ စည်းချက်သံတွေ ကို ထပ်ခါထပ်ခါ နားထောင်နေခြင်းဟာ သွေးဖိအား ပြောင်းလဲ မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေ သလို နှလုံး ခုန်နှုန်း မြန်နေ တာကိုလည်း လျော့ကျ စေနိုင်ပါတယ်။
သီချင်းနားထောင်တာဟာဆိုရင် သွေးဖိအား ၊ နှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့ ခန္ဒာကိုယ် အပူချိန်တွေကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်ပြီး ကိုယ်နားထောင်တဲ့ သီချင်းပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မကြာသေးခင်ကမှ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ စစ်တမ်းအရတော့ ဂီတနားထောင်ခြင်းဟာ မျက်လုံးသူငယ်အိမ်ကို ပိုကျယ်လာစေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ သီချင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ နားထောင်သူရဲ့ သီချင်းအပေါ် စိတ်ခံစားမှုတို့ပေါ်မူတည်ပြီး မျက်လုံးသူငယ်အိမ်က ပိုကျယ်လာတာပါ။
ဒါ့ကြောင့် ဆရာ / ဆရာမတွေအနေနဲ့ အိပ်ငိုက်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို သူတို့ အကြိုက်ဆုံး သီချင်းတွေကို နားထောင်ခိုင်းတဲ့နည်းနဲ့ အိပ်မငိုက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Original link - http://health.thithtoolwin.com/2015/11/blog-post_76.html